Ry mpanjifa mpanararaotra | Martech Zone
Azoko antoka fa samy manana ny iray amin'ireo karazana mpanjifa ireo ny tsirairay. Tena voatahy aho nandritra ny folo taona lasa izay nanana mpanjifa izay tena faly niara-niasa tamiko. Hitako ny fomba nitondran'ny orinasa sasany ny mpanjifany ary halako izany. Izaho dia mikendry ny amin'ny serivisy avo lenta kokoa. Nanome toky tafahoatra aho ARY natolotra be loatra. Saingy, ampio… io client iray io… raha mba manoratra taratasy fotsiny aho…
Ry mpanjifa mpanararaotra,
Raha niverina ianao rehefa nifidy anay ho mpivarotra dia nametraka fanontaniana maro be ianao ary notaritaritanao tsy nisy indrafo tamina horonantsary mena teo aloha. ianao nanapa-kevitra fa izahay no vokatra mety aminao. Ankehitriny rehefa nifidy anay ianao dia tsy anay fa tsy faly ianao ankehitriny amin'ireo fiasa sy fiasa nasehonay taminao ary tianao. Tsy nandainga izahay. Tsy nanao fanambarana diso izahay. Ianao no nanova ny sainao.
Mbola hirehareha amin'ny zava-misy fa nahatratra 100% ny ny fepetra ary mihoatra ny rehetra ny fe-potoana. Izany no fampanantenanay nataonay taminao ary notazoninay izany.
Na eo aza ny zavatra mety hinoanao, tsy ny hamotika ny orinasanao no ifantohanay. Ny tanjonay dia ny hanohy hamolavola ireo vahaolana lehibe indrindra eto ambonin'ny planeta. Fantatray fa mihoatra ny mpivarotra hafa rehetra izahay amin'ny endri-javatra, tsy fitoviana, fampiasa, ary manana ambina fikajiana mihoatra ny orinasa hafa izahay.
Na dia tsy manolotra ny mailaka na nomeraon-telefaoniny aminao aza ireo mpifaninana aminay, dia nampahafantatra anao manokana ny mpiasa tsirairay avy izahay, nanome anao ny mombamomba ny fifandraisanay feno, ary manana fanampiana manokana 24/7 izahay. Ny tanjon'ity dia ny tsy hanome fitaovana ho anao hanambaniana anay, eo izy io satria miahy anao izahay, ny orinasanao ary ny mpanjifanao.
Ny mpanjifa rehetra dia laharam-pahamehana # 1. Na dia toa tsy azo ekena aza izany raha mandany vola bebe kokoa aminay ianao, dia ho faly ianao rehefa mandany vola be dia be miaraka aminay ny hafa.
Izahay dia mandinika tsy tapaka ny fironana amin'ny indostria, ny haitao, ary ny tobin'ny mpanjifa ka tsy mila izany ianao. Izany dia manome antsika fahitana stratejika sy fihemoran'ny vokatra misy endri-javatra sy fanatsarana izay mihoatra ny taona manaraka. Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, tsy mipetraka eo amin'ny sezalava milalao World of Warcraft izahay ary miandry ny fitarainana manaraka. Miasa izahay, manambola ary manamboatra fanatsarana isan'andro. Manana ny fandaharam-potoanan'ny asanay izahay. Ny fitakianao ny famoahana eo noho eo ny endri-javatra vaovao dia misy fiatraikany amin'ny drafitra izay efa iasantsika sy ny tanjona efa napetrakay. Fantaro fa hanao izay farany azonay atao izahay hametrahana ny tadiavinao alohan'ny hafa - saingy mila fotoana fohy ny fanitsiana ny fandaharam-potoana, ny tanjona ary ny andrasana amin'ny tsirairay ao amin'ny fikambananay.
Ny fikiakiahana fampiasa iray ho vita omaly dia tsy hanatsara ny kalitao na ny fahatokisana an'io endri-javatra io. Izahay dia manana dingana, fitsapana ary antoka ara-kalitao ho anao fiarovana, tsy antsika.
Raha isaky ny miantso anao izahay dia ny maniratsira anay sy manambany anay no tanjonao - tsy hiala amin'ny lalanay izahay hiantso anao sy hanampy anao hanatsara ny valin'ny orinasanao. Tsy afaka mianatra aminao izahay raha tsy omenao anay ny fotoana. Hitsahatra tsy hiezaka mafy hanampy anao izahay satria miahy ny mpiasanay izahay ka tsy tianay ny hijerena azy ireo. Aleonay mandany ny fotoanantsika amin'ireo mpanjifa izay mahalala ny fahaizan'izy ireo nanambola ary te hiara-hiasa aminay ho an'ny tanjona iraisana.
Ny orinasanay dia tsy mitombo folo heny isan-taona satria tsy mahay ary tsy mahatakatra ny zavatra ataonay. Manova ny indostria izahay ary ekena ho azy. Ny fiovana dia mitaky filana, loharano ary fotoana. Mahareta aminay fa tsy hanenina ianao. Afaka miara-miasa aminay ny mpanjifanay na afaka miady aminay izy ireo, iza araka ny eritreritrao no handray soa bebe kokoa?
Ny fitazonana ny mpiasa sambatra ho sambatra dia voaporofo fa manatsara ny tsy fivadihan'izy ireo sy ny famokarany. Mihevitra ve ianao fa tsy mitovy amin'ny mpivarotra fampiharana anao?
Ilay mpivarotra izay hendry dia ampy nisafidy
Tags: APIappifierfampiharana interface tsarab2cgamificationjsonfitantanana lazafitsaharanasavonyfizahana fizahanafitilianahevitra momba ny hevitry ny mpampiasaiPhone wordpressfampiharana iphone wordpressXML
15 Desambra 2007 à 7:28
Tiako ity. Avereno averina indray ny andalana roa voalohany toy izao:
“Tamin'ny fotoana nisafidiananao anay ho mpivarotra, dia nametraka fanontaniana be dia be ianao ary nitaritarika anay tsy nisy indrafo namakivaky ny kilaometatra mena, nanao lisitra tamin'ny antsipiriany ny andraikitsika tsirairay avy ary tsy raha tsy efa nanana fanambarana feno amin'ny antsipiriany momba ny asa nekenao. manapa-kevitra ianao fa izahay no vahaolana mety aminao.
Ankehitriny rehefa nifidy anay ianao, dia tsy fahadisoanay ny fiovan'ny olan'ny orinasanao ary tsy faly amin'ireo endri-javatra sy fiasa izay nifanarahanay fa hamaha ny olana araka ny famaritanao azy ireo tamin'izany ianao. Tsy nandainga izahay. Tsy nanao diso izahay. Niova ny toe-javatra misy anao sy ny tontolo iainanao.
Amin'izao fotoana izao dia tokony hivondrona indray izahay ekipa ary tokony hifantoka amin'izany
ny fomba hamolavolana vahaolana mahomby amin'ny olana ara-barotra navaozina …………………………
15 Desambra 2007 à 9:05
Faly aho nandefa ny version PG-13. haha. Te-handefa ampolony vitsivitsy amin'ireo ho an'ny mpanjifa sasany aho. Eo ambanin'ny lisansa creative commons ve izany? Lahatsoratra lehibe.
Dec 16, 2007 amin'ny 2: 04 AM
Gosh, toa tena misy tokoa izany rehetra izany. Saika tahaka ny niainanao tamin'ny alàlan'ny reaming an-telefaona ... '-)
Dec 16, 2007 amin'ny 10: 14 AM
Ny mailaka dia tena tsy ao anaty tabilao ihany koa! 🙂
Dec 16, 2007 amin'ny 6: 03 AM
Eny, nanana mpanjifa sasany tsy faly aho rehefa nampitombo avo roa heny ny fifamoivoizan'izy ireo sy ny varotra… taty aoriana dia lazao aminao fa mahafantatra orinasa avy any India izy ireo izay manome mpitsidika 1000000 isan'andro amin'ny $25.
Dec 17, 2007 amin'ny 8: 59 AM
Avelao ho an'i Ade ny hametraka izany amin'ny fehezan-dalàna tsotra sy mahay miteny Pseudocoded!